musha NAYE AMERICAN SoCCER STORI Canadian Soccer Players Alphonso Davies Childhood Nhau Uye Untold Biography Chokwadi
Kutanga kuenda, anonzi "Chef D". Tinokupa yakakwana kuzere yeAlphonso Davies Childhood Nhau, Biography, Mhuri Zvikonzero, Vabereki, Upenyu hwepakutanga, Mararamiro, Hupenyu hwepamwe uye zvimwe zviitiko zvakakurumbira kubva paaive mwana kusvika pakuzivikanwa.
Hupenyu nekusimuka kwaDavies Alphonso. Mifananidzo Credits: Instagram uye Chinangwa.
Ehe, iwe neni tinoziva kuti ndiye mumwe wevatambi venhabvu vetsiva kuti vabuda muMLS. Nekudaro, vashoma vashoma ve abalandeli vanofunga shanduro yedu yeAlphonso Davies 'Biography iyo inonakidza kwazvo. Iye zvino pasina imwezve ado, ngatitangei, kutanga ne a tộc, ichiteverwa naAlphonso Davies Wiki, pamberi penyaya yake Yakazara.
Alphonso Davies Biography Chokwadi (Wiki Inquiries)
ZITA RIZERE: Alphonso Boyle Davies
DHAI NEMUFANANIDZO AKOBATA: Mbudzi 2, 2000- Buduburam, Ghana
AMAI: Victoria Davies
BABA: Debeah Davies
HANZVADZI SIKANA: Ruth Davies
mudiwa Jordyn Huitema (as at Feburary 2020)
DZEMHURI: Liberia (West Africa)
CHITENDERO: ChiKristu (Katurike)
DZIDZO YEMAHARA: Amai Theresa Katoreji chikoro, Edmonton.
HOBBies: kutamba uye kutamba mitambo yevhidhiyo
NET WORTH: $ 1 miriyoni (Kubva munaFebruary 2020)
CURRENT TEAM: Bayern Munich (Kubva munaFebruary 2020)
KUSVIRA NEMUKA 1.81 m (5 ft 11 mu), makore 19 (sezvaive munaFebruary 2020)
OCCUPATION: Nhabvu (Winger, Kumashure Kwazvo)
Alphonso Davies ' Nyaya Yemwana:
Yekutanga inozivikanwa yehudiki mufananidzo waAlphonso Davies. Chikwereti: Instagram.
Alphonso Boyle Davies akaberekwa musi wechipiri waNovember 2 kuna amai vake, Victoria Davies, uye baba, Debeah Davies, pamusasa weBuduburam hupoteri kuGhana. Ndiye mwana wekutanga uye mwanakomana kubva pavana vatatu vakaberekerwa Victoria naDhebhiya.
Ehe, iwe watinzwa zvakanaka!, Alphonso akaberekerwa mumusasa wevapoteri weGhanian, zvichireva kuti, ari mamaira mamaira kubva kuguta reGhanian. Chokwadi chinoudzwa!, pakutanga aifanirwa kuve wenyika yeRibrari. uye Waizviziva here? Vabereki vaAlphonso Davies vakatiza kubva kuLiberia (nyika yekumadokero kweAfrica) muna1999, mushure mehondo yechipiri yeLiberia.
Kwete vabereki vake chete, asi vazhinji vemhuri yemhuri yaAlphonso vaDavies vakafamba mazana emamayera mhiri kweWest Africa kudzamara vazowana nzvimbo tsvene kumusasa wevapoteri weBuduburam pedyo neAccra kuGhana kwaakaberekerwa. Yakanga iri kumusasa uyo mudiki Alphonso akapedza makore mana ekutanga ehupenyu hwake achikurira mune imwe nyika isiri yake kune yake mhuri kwayakabva.
Alphonso Davies Vabereki vaive vasiri kungotiza kubva kuhondo. Ivo vaifamba mamaira kuWest Africa vachitsvaga hupenyu hwakanakisa hwemwana wavo asati aberekwa - gamba renhabvu remangwana. Mufananidzo Chikwereti: Google Mepu uye Instagram.
Alphonso Davies ' Mhuri Yacho:
Taura nezvemhuri yemhuri yaAlphonso Davies, vabereki vake pasina mubvunzo, ndevaRibhiya vanobva mumhuri yakashata yemhuri. Debeah naVictoria vaive vakaroora vadiki pakatanga Hondo yechipiri yeLibhiya, kukura kwakavasiya vaine sarudzo dzekupinda muhondo kana kutiza. Neraki, ivo vanosarudza iyo yekupedzisira uye ikozvino, vese (vanoratidzwa pazasi) vanorarama kuti vatamhe sarudzo yavo yehupenyu pane kutsakatika kungangoitika kwemuti wemhuri yavo.
Vabereki vake vanonyemwerera nhasi nekuti vakatora sarudzo yekutiza hondo kutanga. Mufananidzo Wemifananidzo: Instagram.
"Zvakanga zvakandiomera kugara muLiberia panguva yehondo nekuti kupona kunoreva kuti iwe unofanirwa kunge uine pfuti kurwa." "Isu takanga tisinga farire izvozvo,"
anoyeuka baba vaAlphonso Davies. Parutivi rweamai vake, anoyeukawo kuyambuka pamusoro pezvitunha kuti awane chikafu chemhuri yake. Chokwadi, aya aive asiri iwo enzvimbo dzavaizoda kuti vana vavo vakurere pavari.
Alphonso Davies ' Dzidzo uye Basa Rekuvaka:
Mhuri yaAlphonso Davies yakatambira chinzvimbo chekutamira kuCanada sechikamu chechirongwa chekugara zvekare panguva iyi aive aine makore mashanu ekuzvarwa. Vakasvika munyika muna 2005 uye vakatanga kugara kuWindsor muOntario.
Kwapera gore, mhuri iyi yakatamira kuguta reEdmonton muAlexanda. Yaive iri muguta iro hupenyu hwakatanga chaizvo kuna Alphonso, uyo akakura semwana anofara pamwe chete nehanzvadzi yake mudiki Ruth uye munun'una anozivikanwa.
Ainge asiri kungokura achifara muCanada asi aive munzira yekuve mugari weCanada. Mufananidzo Wemifananidzo: Youtube.
Muchokwadi, minda yeuswa yeNorthmount Elementary kuEdmonton ndipo pakatanga Alphonso Davies kudzidza kutamba bhora semutambo wevacheche. Apa ndipo pakatanga bhora rake bhora.
Nezve dzidzo yake, Alphonso akatanga kuenda kuchikoro Amai Theresa Katolika muguta rimwe chetero reEdmonton. Kare ikako, zvainge zvave kusingaite kuti asaone hunyanzvi hwake hwekuzvibata uye maitiro aakadzimira vezera rake achitamba nhabvu kuchikoro kwaMai Theresa Catholic.
Alphonso Davies ' Makore Ekutanga muBhora:
Kutenda kuna Melissa Guzzo - Mudzidzisi weAlphonso wegiredhi 6 uye murairidzi wezvemitambo pachikoro chaAma Theresa Katurike - nhabvu inomiririra nhabvu yakanyoreswa muchirongwa chapashure pechikoro chevana veguta remukati vanonziIyo Yemahara Footie Chirongwa".
Ichokwadi maererano nezita rayo, Mahara Footie yaive yemahara sezvo yaibatsira vabereki vaAlphonso Davies avo vasina kukwanisa kukwidza mari yebhora kune mamwe makoro ebhola. Chirongwa ichi chakabatsirawo vamwe vana vemukati-dhorobha vasingakwanise kubhadhara mari yekunyoresa kana kutakura kuti vafarire zvido zvavo munhabvu. Alphonso gare gare, akaenderera mberi nekujoinha kirabhu yemuno Nicholas Academy. Izvi zvakateverwa neakakosha 8-makore ekutanga basa neEdmonton Strikers.
Iye mukomana aive nemufaro aive paEdmonton Strikers mushure mekudzidziswa nevechidiki kirabhu Nicholas Academy. Mufananidzo Wemifananidzo: Youtube.
Alphonso Davies 'Biography- Nzira yekuenda Mukurumbira Nyaya:
Muna 2015, vabereki vaAlphonso Davies vakabvuma kushandurwa kwebasa, iko kupihwa kwaizotora mwanakomana wavo wekutanga kubva kwavari kuti atambe muVancouver. Neyedu kuyerwa, yaive anenge 1,159.5 km kubva (nemugwagwa) kubva kumhuri yemhuri muEdmonton. Debeah naVictoria vakapa Alphonso makomborero avo uye vakamutumira kunobatana neve Vancouver Whitecaps vechidiki.
Iyeye aive aine makore gumi nemana ekuzvarwa pakirabhu, zvekuti akave wekutanga kutamba mutambi kusaina chibvumirano cheUSL pazera gumi nemashanu, mwedzi mitatu muna 14. Chii chimwe?… Alphonso akawana kukwidziridzwa kuVancouver Whitecaps FC's timu yekutanga muna 2016, akaita MLS yake kutanga gore rimwe chete uye akazotevera kuoneka.
Pazera ramakore gumi nemashanu, Alphonso aive mudiki uye aida chinzvimbo aine hunhu hwakakodzera kuti abudirire. Mufananidzo Wemikwereti: VancouverWhitecaps.
Alphonso Davies 'Biography- Rise kune Mukurumbira Nyaya:
Panguva yepamusoro yebasa raAlphonso naVancouver Whitecaps FC, akatumidzwa zita remutambo weChikwata cheMutambo weGore ra2018 zvakare akagamuchira mubairo wevachena 'Goal of the Year. Mushure maizvozvo, akazoenda kuchikwata ichi nekurova zvibodzwa zviviri mukukunda kwavo 2-1 kukunda Portland Timbers. Panguva ino, iye mudiki wepamberi aigona kunzwa mugumo wake uchimudaidza kubva kuEurope.
Mwedzi gare gare munaJanuary 2019, Alphonso akatanga mwaka mutsva achitamba hofori dzeGerman Bayern Munich. Akasainwa kuchikwata ichi rekodhi ye $ 9.84m mubhadharo muna 2018. Kubvira pamakore gumi nematatu paakapinda mukirabhu, anga achizunza mafudzi nema superstars - kunge Robert Lewandowski, Philippe Coutinho, David Alaba - uye akatokunda rake rekutanga Bundesliga zita nekirabhu. Vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
Chokwadi, kusimukira kwake kumukurumbira kwave kuri zvemeteoric. Mufananidzo Wekodhi: ESPN.
Alphonso Davies 'ndiani Musikana?… Ane Mukadzi uye Kid (s)?
Akanyatsoiwana mutambo wakanaka muJordyn Huitema. Haana kudaro here?
Kure kubva kumunda wekutamba, Alphonso anoita nhau dzehukama hwake nemusikana akazvarwa wekuCanada Jordyn Huitema. Hazvisi zvakawanda zvinozivikanwa nezvekuti shamwari dzerudo dzakatanga kudanana riini. Nekudaro, vanga vari pamwe chete kwenguva yakareba kuti vaonekwe seCanadaan Power Soccer vakaroora nevatori venhau. Izvi zvinodaro nekuti Jordyn anotamba nhabvu inoridza French French 1 Féminine kirabhu Paris Saint-Germain uye timu yenyika yeCanada.
Alphonso anogara achipinda muParis kunotora nguva yakanaka nemusikana wake Jordyn vasati vadzokera kuBayern Munich. Ivo vanoisa mari yakaringana pabasa ravo rekubika, iko kukura kunotsanangura ivo vasina mwanakomana (kana) mwanasikana / vakadzi kunze kwemuchato. Zvisinei, hapana mutongo wekuti vanogona kutora hukama hwavo kune imwe nhanho (muchato) pasina nguva.
Alphonso Davies ' Hupenyu hwemhuri:
Alphonso Davies ane chikwereti chake mukubudirira mubhola kumhuri yake inoshamisa. Gara kumashure uye zorora sezvatinokuunzira chokwadi pamusoro pemitezo yemhuri yake mune ino chikamu. Isu tinotanga nekukubatsira iwe kuti uwane chokwadi chakawanda nezvevabereki vaAlphonso Davies.
About Alphonso Davies Baba naamai:
Vabereki vemukundi ndiDhebhe naVictoria zvichiteerana. Muna 2005 Debeah naVictoria vakaita danho rekuchinja hupenyu kubva kuCanada kubva kuGhana vasingazive nezve nzvimbo kana kuva nehama ikoko. Ivo vaingotenda chete kuti kusimuka kwaizobatsira kubhadhara mwana Alphonso ramangwana rakajeka.
Sangana naDavies Alphonso vabereki. Mufananidzo Wemifananidzo: Instagram.
Izvi hazvitauri kuti sarudzo yakabhadhara kupfuura zvavaigona kufunga. Muchokwadi, iye anokunda anoona kuti zvinoita kuti zvive nyore kuzvikurudzira iye pese paanotarisa kumashure kune zvinosandura-hupenyu zvisarudzo zvakaitwa nevabereki vake vanogara vachitsigira nezveramangwana rake.
About Alphonso Davies Sibling nehama:
Alphonso ane vakoma vaviri vadiki vake vakuru kwaari. Vanosanganisira munin'ina wake Ruth uye mudiki anozivikanwa mukoma. Vana vacho vakaberekerwa muCanada. Saka nekudaro, vaisafanirwa kutevera maitiro ekuwana vagari veCanada sezvakaitwa naAlphonso.
Alphonso Davies nababa vake, amai nevanun'una. Mufananidzo Wemifananidzo: Instagram.
Kunyangwe iye anokunda asina kupa mapepanhau kuti azive zvakawanda nezvehama dzake. Uye haana kutaura nezvemhuri yake uye madzitateguru ake maererano nezvavanasekuru nasekuru nasekuru vake. Saizvozvo, vanababamunini vaAlphonso, babamunini, hama dzemukoma, muzukuru uye nanasekuru havazivikanwi panguva yekunyora iyi bio.
Alphonso Davies ' Hupenyu Hwega:
Alphonso Davies ndiani?… Iwe unoziva here kuti anofukidza hunhu hunoratidzwa nevanhu vanotungamirirwa neScorpio Zodiac Sign? Chokwadi chiri, Chef D (zita rake zita) anoda, ane ruzivo, akasarudzika uye haana kuomerwa kutaura chaizvo zvaari kuda kutaura.
Kune vashoma vatambi vanoziva kutaura ivo pachavo mushe. Alphonso anoita chinyorwa. Mufananidzo Wekodhi: Bundesliga.
Kuwedzerwa kune hunhu hweAlphonso's persona ndicho chigaro chake chekusaburitsa zvakawanda nezvehupenyu hwake hwega uye hwepachivande.
Kufarira uye kuhwina kwemurume uyu zvinosanganisira kutamba, kutamba mitambo yemavhidhiyo uye kupedza nguva yakanaka nemhuri yake neshamwari. Akanakawo pakubika, hobho yakazopa zita rake rekuti "Chef D".
Alphonso Davies ' Maitiro Ehupenyu:
Nezve mashandisiro anoita Alphonso Davies uye kushandisa mari yake, ane mari inofungidzirwa kusvika pamiriyoni imwe chete yemadhora panguva yekunyora iyi biography. Mirodhi yeupfumi hwemunhu anokunda inotangira pamubhadharo uye mihoro yaanowana kubva mukutamba nhabvu yepamusoro.
Iyo winger zvakare inotora yakakosha mari kubva kune endorsements. Nekudaro hapana mibvunzo pamusoro pekuti angagona sei kuwana zviwanikwa zvakanakisa kunge mota dzekunze uye dzimba dzinodhura.
Mufananidzo wakajairika wemunhu anokunda achiedza kutora bhegi rake riya kubva kumashure kwemotokari akafanofungidzirwa kuve Audi. Chifananidzo Chemifananidzo: Spox.
Alphonso Davies ' Chokwadi:
Kugumisa yedu Alphonso Davies nyaya yehudiki uye biography, heano zvishoma zvinozivikanwa kana zvisingataurike chokwadi pamusoro peiyo winger.
Chokwadi #1- Yake Yemari Yekuputsa pamasekondi maviri:
Kubva paakabuda muna Ndira 2019, vateveri vazhinji vakafungisisa nezvazvo mangani Davies Alphonse anowana?…. Kuti gore ra2019, Chef D chibvumirano chakamuona achihwina mubairo weanosvika mamirioni 1.2 emiriyoni pagore. Chakatonyanya kushamisika pasi apa ndechekuti Alphonso Davies 'mubhadharo kuputswa kwegore, mwedzi, zuva, awa, miniti uye masekondi.
Chaanotambira Negore € 1,200,000 £ 1,034,559
Chaanowana PaMwedzi € 100,000 £ 86,213
Izvo zvaari kuwana Per Vhiki € 24,390 £ 21,028
Izvo zvaari kuwana Per zuva € 5,949 £ 5,129
Chaanotambira Paawa imwe € 248 £ 214
Izvo zvaari kuwana PaMaminitsi € 4.13 £ 3.56
Izvo zvaari kuwana Per Serconds € 0.07 £ 0.06
Uku ndiko kuwanda kwakaita Alphonso Davies kubva pawakatanga kuona peji ino.
Kana izvo zvaunoona pamusoro zvichiramba pa (0), zvinoreva kuti urikuona peji re AMP. ikozvino Click HERE kuti awone muhoro wake zvichikwira nemasekondi. Waizviziva here? Wepakati murume kuGermany anofanira kushanda kweanosvika makore 1.84 kuti awane mari € 86,123, iyo mari iyo Chef D inowana mumwedzi mumwe.
Chokwadi # 2- Kusatendeseka muFIFA Nzvimbo:
Alphonso angori makore maviri chiitiko achitamba nhabvu yepamusoro-ndege, kusimudzira uko kunotsanangura nei aine yakaderera FIFA muyero ye73. Icho chinozivikanwa chokwadi chekuti nguva inoporesa uye inovandudza. Nyaya yacho yaisazove misiyano kune iyo Winger sezvo iye achigona kudarika 90, kunyangwe achive mutambi wenhabvu weFIFA.
Matanho ake achanyora kuwedzera mamiriro ekunze mumakore anotevera. Mufananidzo Chikwereti: SoFIFA.
Pakaturikidzana vanoputa uye vanonwa zvisina basa vane chinhu chemiromo yakasviba uye vanogara vachimhanya-ins nemutemo. Alphonso ndiyo yakakwana inopesana nezvose zviri kubuda.
Chokwadi # 4- Tattoos:
Ndeipi pfungwa yekuve neTattoos kana munhu achidada nerima? Kunze kwekunge muviri wemitambo wakadhirowa netwuchena tambo, Alphonso angadai asiri kuzoda chero kuenzanisa kukwirira kwake kwemamita mashanu gumi mairi.
Waona chero tattoo here? tizivise mubhokisi rekutaura. Mufananidzo Wemifananidzo: Instagram.
Chokwadi # 4- Chii chinonzi Alphonso Davies 'Chitendero:
Unoyeuka here amai Theresa Chikoro cheCatholic?… Ehe, chikoro cheKatorike mukati Edmonton, Canada. Isu takashandisa izvozvo kureva kuti vabereki vaAlphonso Davies vanga varera mwanakomana wavo kuti vatevedze zvitendero zvechiKristu kutenda. Kunyange zvakadaro, mudiki haana kunge achinyatso kutaura nezve maitiro ake ekutenda. asi, kusawirirana kwedu kuri mukuda kweAlphonso kuva muChristu nekuti ane hanzvadzi inonzi Ruth amai vake vaine zita racho - Victoria.
CHOKWADI CHINOGONA: Tinokutendai nekuverenga yedu Alphonso Davies Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi. At LifeBogger, tinoedza kururamisa uye kusasarura. Kana iwe ukawana chimwe chinhu chisingaratidzika sezvakanaka, tapota tigovera icho isu nekupindura pazasi. Isu tichagara tichikoshesa uye nekuremekedza mazano ako.
Joseph NK Kolleh Kukadzi 27, 2020 At 11:25 pm
Ini ndinofara kwazvo seRibhiya kuona hama yangu yekuLibhiya ichitamba nhabvu yemhando iyi, ndinomuishuvira. MaRiberian ese anotenda kuvonga kuwe iwe mukoma Alphanso Davies, kunyangwe iwe uchizvishingisa kuenda kuCanada, isu tichiri kufarira sevaLibertan .. ndokumbirawo udzoke kumba uite zvinhu zvidiki zvine chekuita nenyika.
Daniel Wonsiah Kubvumbi 29, 2020 At 2:56 am
Mwari vakuropafadzei Alphonso LIB rangariraiwo imba yako hama tinokuda nekutenda